Sida loogu biiro laba sawir on Mac | waxaan ka imid mac
Sida loogu biiro laba sawir on Mac
Maanta waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno mid ka mid ah hawlaha aan ku qaban karno Mac-gayada ku biir laba sawir ama ka badan si fudud oo degdeg ah. Xaaladdan oo kale waxaa jira dhowr qalab iyo ikhtiyaarro ah oo aan ka heli karno Mac-kayaga si aan u gudano hawshan, hadda waxaan ku soo koobeynaa qaar ka mid ah casharkan.
Way dhici kartaa in hawshan ay in badan oo idinka mid ahi hore u garanayeen laakiin xaaladaha qaarkood ay hubaal tahay Way fiican tahay in la ogaado qalabka ama codsiyada aan haysano in macOS si aad ugu biirto laba sawir ama sawirada si toos ah qalabkayaga.
1 Sida loogu biiro laba sawir on Mac
2 Isticmaal bogag si aad ugu biirto laba sawir
3 Pixelmator Pro, Photoshop iyo apps la mid ah sidoo kale waa ansax
4 [Bonus] Appew Picew ee Qalabka IOS
4.1 Sida loo isticmaalo Picew
Sidii aan ku sheegnay bilowgii, tani waxay u ekaan kartaa hawl aad u dhib badan haddii aanad garanayn qalabyada aad hore ugu rakibtay kombiyuutarkaaga. Oo waa in dhammaan Macs ay bixiyaan ikhtiyaarka ah dhejinta laba sawir iyada oo aan loo baahnayn codsiyada dhinac saddexaad.
Waxa ugu horreeya ee maskaxdeena ku soo dhaca inta badan marka aan isku dayeyno inaan wax ka beddelno sawirka ama shaashadda waa in la furo aaladda Preview ee Mac. Xulashadan nasiib darro ma bixiso habka ku biirista laba sawir xilligan la joogo markaa waa in la eego in yar oo dheeraad ah iyo u tag codsi kale oo Apple ah, Bogagga. Hubaal qaar badan oo idinka mid ah ayaa la yaabay, laakiin waa run inay yihiin ikhtiyaarka ugu fudud, ugu dhaqsaha badan uguna waxtarka badan ee lagu dhejiyo laba sawir oo baahida ugu weyn ee codsiyada dhinac saddexaad.
Isticmaal bogag si aad ugu biirto laba sawir
Waxa ugu horreeya ee ay tahay in aan samayno waa in aan galno codsiga boggaga, tan haddii aanaan haysan waxaan ku soo dejisan karnaa gebi ahaanba bilaash kombuyuutarkeena App Store. Marka aan ku rakibno Mac-kayaga waxaan fulineynaa si fudud waxaan furaynaa dukumeenti maran cusub.
Hadda waxaan horeyba ugu haynay kooxdayada arjiga u furan inuu ku biiro labadan sawir, way fududahay sida si toos ah uga soo jiid miiskayaga ama ka soo jiid meesha sawiradu ku yaalliin sanduuqa maran. Marka aan iyaga ku haysanno codsiga, waa inaan si fudud u hagaajinaa cabbirada taasna waxaan ku dooran doonaa tilmaame mid kasta.
Kadib, marka cabbirada la hagaajiyo, waxaan ku keydin karnaa feylka sawirada ama sawirada horeyba ugu lifaaqan miiskayaga si toos ah ama galka la rabo. Hawshani runtii waa ku fududahay boggaga, markaa marka hore waxaanu kula talinaynaa dhammaantiin u isticmaal codsigan Mac kan iyo hawlo kale oo badan.
Anigu shakhsi ahaan waxaan dhihi karaa in aan isticmaalo qalabkan si aan u tolo sawirada maadaama aan u arko inay aad u raaxo badan tahay oo ay fududahay in la isticmaalo, iyo waxa ugu wanaagsan oo dhan waa in aysan lumin tayada oo lagu hagaajin karo sidaad jeceshahay. Si macquul ah, isticmaale kastaa wuu ka duwan yahay, laakiin waa inaad ogaataa in boggaga aad ku fulin karto falkan.
Pixelmator Pro, Photoshop iyo apps la mid ah sidoo kale waa ansax
Si macquul ah, marka aan bilowno raadinta suuqa codsiyada tafatirka sawirada ee ikhtiyaarka ku biirista laba sawir, aad ayey noogu fududahay. Oo waa taas maanta waxaa jira codsiyo badan oo bixiya doorashadan tafatirka sawirka.
Pixelmator Pro waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan beryahan dambe ka mid ah isticmaalayaasha nidaamka deegaanka ee macOS (sidoo kale iOS) tan iyo waa la heli karo qiimo macquul ah waxayna bixisaa fursado badan oo tafatir sawireed. Si macquul ah, codsigan kaliya maaha in la sameeyo midowga laba sawir, sidoo kale wuxuu u adeegaa sida tifaftiraha sawirka si loo hagaajiyo tayada, dhalaalka, iwm. Dareenkan, tafatirka sawirada iyadoo la adeegsanayo Pixelmator Pro waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican isticmaalka noocaan ah.
Xaaladdan oo kale arjiga Pixelmator Pro wuxuu bixiyaa tijaabo bilaash ah kuwa doonaya inay soo dejiyaan codsiga. Waad soo dejisan kartaa arjigan oo isku day gabi ahaanba bilaash waa inaan galnaa si toos ah uga socda website-kaaga ama dukaanka Mac app laftiisa, Mac App Store.
Dhanka kale, waxaa muhiim ah in la ogaado in waqti ka hor qaar ka mid ah isticmaalayaasha ay isticmaaleen aaladda Horudhaca MacOS si ay u qabtaan hawshan ku biirista sawirrada, laakiin ma fududa oo waxay u baahday tillaabooyin aad u badan. Codsiyada aan maanta haysano, aad ayey ugu fududahay in lagu qabto hawsha Pixelmator Pro, Photoshop ama xitaa boggaga macOS laftiisa, marka loo eego shaqsi ahaan Weli waxaan qabaa inay tahay doorashada ugu fiican haddii ay tahay inaad hawshan ku qabato wakhtigeeda oo aan ahayn hab soo noqnoqda.
[Bonus] Appew Picew ee Qalabka IOS
Dhammaan kuwa u isticmaala iPhone-ka ficilka noocaan ah, waxaan ku muujin karnaa dhammaan codsiyada laga heli karo Picsew. Codsigan muddo dheer ayaan garanayay oo runtii waa mid ka mid ah kuwa aan sida tooska ah uga isticmaalo iPhone-ka ama iPad-kayga. Waa codsi taariikh dheer ku leh Apple App Store, markaa maaha codsi cusub oo sababi kara cillado ama dhibaatooyin.
Xaaladdan oo kale arjiga dhawaan helay update ka tagaya at 3.8.1 dhammaan isticmaalayaasha. Waxay saxday qaar ka mid ah dhibaatooyinka lagu arkay nuqulkii hore iyo hagaajin toos ah oo la hirgeliyay toddobaad ka hor, sida u dhoofinta PDF ama hagaajinta hagaajinta abka.
Sida loo isticmaalo Picew
Codsigan runtii waa sahlan tahay in la isticmaalo isticmaale kasta oo lagu soo dejiyo iPhone-kooda. Marka si toos ah loo furo isticmaaluhu wuxuu leeyahay ikhtiyaarka ka dooro mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah sawiradaada galleryTan waxa laga beddeli karaa Settings settings, kuwaas oo aan gebi ahaanba dhammaystirnayn.
Marka sawirada aan dooneyno inaan ku biirno la doorto, waxaan si fudud ku siineynaa ikhtiyaarka ka muuqda hoos si toosan ama toosan. Codsiga laftiisa ayaa u fulin doona shaqada si fudud oo daqiiqad ah waxaan haysan doonaa sawirka dhinac dhinac ah. Waxaan ku kaydsanay gallery oo taasi waa. Codsigan si toos ah ayuu otomaatig ah ugu yahay oo hawsha anaga ayuu anaga u qabtaa. Haddii aad ka mid tahay kuwa sida badan u isticmaala shaqadan, shaki la'aan codsigani wuxuu noqon karaa mid waxtar weyn leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loogu biiro laba sawir on Mac
2nm Mac M4 chip wuxuu imaanayaa qeybta labaad ee 2022 kaligiina ma imaan doono
LG wuxuu soo bandhigay laba kormeerayaal 4K OLED cusub oo leh USB-C